URACHEL LINDSAY KUNYE NOBRYAN ABASOLO BABHIYOZELA IPHATHI YABO YOKUZIBANDAKANYA - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UBachelorette uRachel Lindsay kunye noBryan Abasolo babhiyozela iQela labo lokuzibandakanya eDallas
UBachelorette uRachel Lindsay kunye noBryan Abasolo babhiyozela iQela labo lokuzibandakanya eDallas
UBachelorette uRachel Lindsay kunye nomyeni uBryan Abasolo babhiyozele ukuzibandakanya kwabo nabahlobo kunye nosapho eDallas kule mpelaveki-jonga apha. (ABC / Paul Hebert) CHRIS HARRISON, RACHEL LINDSAY, BRYAN ABASOLO
Ngu: Esther Lee 08/14/2017 ngo-11: 30 AM
U-Bachelorette uRachel Lindsay kunye noBryan Abasolo balugqibe ukhenketho lwabo lweveki ngeCawa, nge-13 ka-Agasti, ngokubhiyozela umtshato wabo ozayo nabahlobo abasondeleyo kunye namalungu osapho eDallas.
U-Abasolo, oneminyaka engama-37, waya kwi-Instagram ebusuku kakhulu ngeCawa ukuze athumele ifoto noLindsay kwindawo yokuzibandakanya, eyayibanjelwe kwigumbi lokuphumla elibizwa ngokuba yiStirr Dallas. Umhlaba wam, wawuchaza lo mfanekiso, kunye negama labo elisemthethweni- # brachel.
Iindwendwe zibandakanya abanye abakhuphisana nabo kwixesha likaLindsay Isidanga sokuqala , kunye nabanye abahlobo bendawo kunye namalungu osapho.
Esi sibini sixelele Ingcaciso kunye nezinye iintatheli kwiveki ephelileyo malunga nezicwangciso zabo zokuphelisa umoya emva kohambo lwabo lweendaba. Ngokucacileyo abazali bam bayazi ukuba ndikhethe bani. Bayandixhasa, bonwabile ngayo, abanakulinda ukuba bazi uBryan kwikhamera, utshilo uLindsay. Kwaye eneneni sinezicwangciso zokwenza oko. Uyazi, xa yonke le nto ithethwayo yenziwe, siya eDallas kwitheko lokuzibandakanya emva koko, ukuchitha ixesha nosapho lwam.
My world ❤️therachlindsay #brachel #engagementparty #dallas #bachelorette #bachelornation
Iposi ekwabelwana ngalo nguGqirha Bryan Abasolo (@thebryanabasolo) nge-Aug 13, 2017 kwi-9: 08 pm PDT
Ukusuka apho, abo babini baya kuqhubeka nokuhamba. Iintsapho azikadibani, utshilo u-Abasolo. Siza kwehla kwiintsuku ezimbalwa siye eDallas kwaye siza kutya isidlo sangokuhlwa nabazali bakhe. Kwaye siya eHouston kwaye sidibane nosapho olwandisiweyo. Kwaye emva koko siza kubhabha siye eMiami kwaye sidibane nabahlobo bam kunye nosapho.
Omabini la maqela ayaqhelana kakuhle namacala omabini osapho. ULindsay, ngokukodwa, uyaqhelana nomama ka-Abasolo. Ndithethile naye amatyeli aliqela okoko ukufota kwenzekile, utshilo. Kwaye enye yezinto zokugqibela awazithethayo kum yindlela awayevuya ngayo ngokuba yinxalenye yosapho. Ndijonge phambili ekumazini. Ndiyathetha, mna naye sinosuku esilucwangcisileyo kunye nomnye thabatha uBryan, ke…
Liwonga elinjalo ukumela idolophu yakuloDallas kunye neTexas Ranger bephosa inkundla yokuqala! Ndonwabile kunxiba @ pudgerodriguez7 inombolo okokugqibela !!! #legend #dallas #texasranger
Isithuba esabiwe nguRachel Lindsay (@therachlindsay) nge-12 ka-Agasti 2017 ngo-12: 17 pm PDT
Ekugqibeleni, bobabini igqwetha kunye ne-chiropractor baceba ukubuyela kwimisebenzi yabo. Ndisebenze nzima ngenene ukufikelela kule ndawo ndikuyo, uLindsay uxelele i-Lizapourunemerenbleus ngo-Epreli, ngelixa wayeseluhambeni lwakhe lwe-Bachelorette. Ndihlala ndifuna ukubambelela kuloo nto. Yinto endiyifunayo ukusukela kwiminyaka eyi-7. Kwaye utata wam angandibulala ukuba ndiyekile.
Inkosana iyathandana neemovie eziqhelekileyo
iikhabhathi ezilumkileyo ezilumkileyo
Uneminyaka emingaphi uVanessa bryant
iindonga zegumbi lokulala